यौनकथा जिन्दगीको खुशी – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १३:२३ English
रञ्जना र अमितको भर्खरै बिवाह भएपनि उनीहरुबिच श्रीमान श्रीमतिको अन्तरङ्ग हुन सकेको थिएन। ‘सुहागरातमा नव विवाहित दुलही नौलो परिवेशमा आएको कारण अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेकी हुन्छे, त्यसैले पत्नीको सहमती छैन भने सुहागरातमै जवर्जस्ती यौन सम्पर्क राख्दा पछिसम्म नराम्रो असर पर्नसक्छ’भन्ने कुनै किताबमा पढेका कारण जबर्जस्ति श्रीमतिलाई भोग्न पनि चाहेन अमितले । सुहागरातको रात रञ्जनालाई अँगालोमा कसेर चुम्वन गर्न खोज्दा उसले मुख बिगार्दै,मुन्टो बटारेको कुराले उसलाई ठुलै झट्का लागेको थियो।ऊ आफ्नी नवविवाहिता दुलहीसँग जति नजिक हुन चाहन्थ्यो, रञ्जना भने त्यति नै टाढा हुन खोज्थी । सुहागरातको दिन होस या पञ्चरात जाँदाको कुरा होस हरेक घटनाहरुले रञ्जनाको व्यवहार दिनप्रतिदिन अस्वाभाविक लाग्दै थियो उसलाई कारण हर रात एक्लिएको थियो उ।नवबिवाहित दुलही उसलाई छुन पनि दिन्नथी त्यतिमात्र होईन उसलाई लोग्नेमान्छेका रुपमा घृणा गर्थी ।
बिवाह भएको महिनौं भईसक्दा पनि उसले लोग्ने हुनुको स्वाद लिन र दिन पाएको थिएन। एकदिन उसले मनमनै आज त रञ्जनासंग एकाकार भएरै छाड्ने निधो गर्यो। खाना खाईओरी बेडरुममा पुग्यो रञ्जना धन्दा सकेर आई र सुत्ने बेलामा लगाउने लुगा लगाएर बेडमा आई। कोठाको रङ्गिन मधुर बत्तीमा पारदर्शी नाईट गाउनमा प्रस्तुत भएकी रञ्जनालाई बेडमा पुग्नासाथ अँगालोमा बाँध्यो।अनि उसलाई छुँदा‚उसका अङ्गहरुमा करेण्ट लागे झैं भयो।रञ्जनासंग एकाकार हुन खोज्दा दिक्क मान्दै झर्केर (मानौं उ पुरुष जातिसंग नै घृणा गर्छे अर्थात उ पतिलाई परमेश्वर ठान्ने कुनै नारी होईन उ) उसले भनी ­”के गर्या यस्तो मलाई यस्तो मन पर्दैन।”भनेकी थिई। उसले पनि प्रश्न गरेको थियो–” त्यस्तो लोग्नेमान्छेले छोएकै मन नपर्नेले किन विवाह गरेकी त ?” “के गर्नु आमाको कुरा नाघ्न नसकेर नि मैले त आमालाई भन्देकी हुँ मलाई यो केटामान्छेसंग बिवाह गरेर जिवनयापन गर्ने कुरा मलाई मन पर्दैन ।मेरो जिन्दगीको खुशी त्यो होईन। तर आमाले बिहे नगरे मर्ने धम्की दिनुभो म लाचार भएँ।” रञ्जनाले भनीन।उसलाई अपेक्षाकृत साथ दिईनन् रञ्जनाले।बरु धकेलेर बेडको पल्लो छेउमा पुर्याईदिईन्। लोग्ने र लोग्नेको चाहनाप्रति उनलाई कुनै चासो थिएन।उनको धकेलाईको झट्काले अमितको प्रतिबद्धता केवल प्रतिबद्धता मात्रै रह्यो ।उसले केहि गर्न सकेन। अर्थात उनीहरु एकाकार हुन सकेनन । उसले देख्यो उसकी स्वास्नी सकेसम्म उ बाट उम्किन चाहन्थी । उसलाई साह्रै गाह्रो भयो र जुरुक्क उठ्यो बाथरुम गयो र अप्राकृतिक रुपमै आफना सारा जोशलाई बाहिरै खन्यायो। अनि बेडमा आएर डङ्ग्रङ्ग पल्टियो । रञ्जना भने उसलाई केही नबोली घृणापूर्वक हेरिरहेको उसले स्पष्ट देख्यो । त्यसपछिका रातहरुमा दुई तीन पटक अमितले लोग्नेका हैसियतले स्वाभाविक रुपमा श्रीमती रञ्जनासंग यौनसम्पर्कका लागि प्रेमपुर्वक प्रयास गर्यो तर सफल भएन । रञ्जनाले पटक्कै साथ दिइन । बरु रञ्जना बहिनीको कोठामा गएर सुत्न थाली ।
रञ्जनाको मित्रता घरका अरुसँगभन्दा नन्दसँग प्रगाढ हुँदै गयो । प्लस टु पढ्दै गरेकी नन्दसँग उसका धेरै कुरा मिले सायद त्यहि कुराले उनीहरुको सामिप्यता बढाउन मद्धत गर्यो । उनीहरुको जिउडाल स्वभाव र अन्य आनीबानी पनि धेरै मिल्दो भएका कारण उनीहरुलाई नजिकिन सहज भयो। गाउँलेहरु नन्द भाउजूबीच त्यस्तो गहिरो मित्रता देखेर नन्द भाउजु भन्या रञ्जनाको जस्तो हुनुपर्छ भनेर उदाहरण दिन्थे। यो देखेर घरका परिवारका सबै सदस्य (अमित बाहेक) खुसी थिए । किनकि प्रायःजसो नन्द भाउजूको सम्बन्ध राम्रो नभएर कलह भएका घटना छरछिमेकमा बेलाबखत सुनिन्थे ।
एकदिन अफिसबाट अमित चाँडै घर फर्कियो । घरमा पस्नासाथ “आमा रञ्जना खोइ?”सोधेको जवाफमा “खै उनीहरुका नन्द भाउजु एक छिन पढ्नु पर्यो भनेर बसीराछन कोठामा ।”भन्ने आमाको जवाफमा उ केहि नभनी कोठातिर लाग्यो । उसको कोठा पुग्नु अघि बहिनीको कोठा थियो । उ बिस्तारै जाँदै थियो बहिनीको कोठाबाट अलि अनौठो आवाज उसको कानमा आएर ठोक्कियो । अनि उ बिरालो चालमा चाबी छिराउने प्वालबाट बहिनीको कोठामा चियायो । तब त उ छाँगाबाट खसेझैं भयो । उसले ज देख्यो त्यसको उसले परिकल्पना समेत पनि गरेको थिएन । नन्दभाउजु दुबै प्राकृतिक अवस्थामा थिए । उनीहरु घरि एकअर्काको छाती मर्दन गर्थे त घरि चुम्बन गर्थे घरि एकअर्काको गोप्य अङ्गचुसुथे चाट्थे र गुद्वारमा पालैपालो औला छिराउँथे । यो दृश्य उसका लागि अब असह्य भयो । उ सरासर आफ्नो कोठामा छिर्यो । अनि डङ्ग्रङ्ग पल्टियो ।मनमनै सोच्यो ­त्यहि भएर पो उ मसंग सम्बन्ध गाँस्न नखोज्दी रैछ त कुरो त्यस्तो रैछ ।
निकैबेरपछि बहिनीले खाजा ल्याईदिई ।उसले बहिनीलाई सोध्यो­”कहाँ गाथ्यौ नि यतिखेर सम्म ?” “ए म एकाउण्टको हिसाब भाउजुसंग सिकीराकी थिए कोठामा।”­बहिनीले सहज रुपमा जवाफ दिई । अमितलाई झनक्क रिस उठ्यो ­”हो‚ कुन एकाउण्टको हिसाब पढ्दैथियौ देख्या थिएँ ।” बहिनी कुनै जवाफ नफर्काई कोठाबाट बाहिरिदै गर्दा त्यत्तिकैमा रञ्जना आईपुगी उसले अमितको कुरा सुनेकी रै छ सायद‚ भित्र छिर्नासाथ जवाफ दिई­” सबै कुरा देख्या हो भने अब त थाहा भयो होला म के हुँ भन्ने कुरा‚हजुरकी बहिनी र म एकै खाले हौं । म तपाईंसंग भन्दा बहिनीसंग खुशी छु। अब मसंग के चाहानुहुन्छ त्यो कदापि दिन सक्दिन। मलाई लोग्ने मान्छे मन पर्दैन। म महिलासंग नै रमाउँछु।यदि तपाईं मलाई माया गर्नु हुन्छ र मलाई साथ दिनुहुन्छ भने म तपाईंकी बहिनीसंग जीवन बिताउन चाहान्छु । मलाई मेरो तरिकाले जिवन जिउन दिनुहोस। म बहिनीलाई लिएर निस्किन्छु भोली मिरमिरे मै किनकी अरुले यो सहमति दिदैनन्। अरुलाई सम्झाउने काम हजुरको।यति सहयोग गर्नु भयो भने म जीवनभर तपाईको गुण सम्झिरहनेछु । तपाई नि आफ्नो जीवन नयाँ पाटोबाट शुरु गर्नुस।तपाईं नि खुशी म पनि खुशी । ” रञ्जनाको कुराले अमित अवाक भयो । ल भन्न नि सकेन र नाई भन्ने हिम्मत पनि गर्न सकेन। किनकी त्यहा तीन जीवनको खुशीसंग जोडीएको थियो यो कुरा । उसले बहिनीलाईनि बोलायो । र सोध्यो ­”रञ्जनाको कुरा सहि हो?” बहिनीले ­” हो ” भनेर सहमती जनाएर निहुरीरहि । “तिमीहरु यसरी खुशी रहन सक्छौ त?”­अमितले प्रश्न गर्यो । “हामी हाम्रो परिचयमा बाँच्न पायौं भने हामी खुशी खुशी जिवन जिउन सक्छौं।”­दुबैले एकै स्वरमा भने ­”हामी आफ्नो परिचय लुकाएर आफ्नो ईच्छा बिरुद्ध हामीलाई समाजमा बाँच्न साह्रै कठिन भएको छ । हाम्रो जिन्दगीको खुशी यो समाजमा सम्भव छैन। हामीलाई हाम्रै सोसाईटीमै खुशी र सन्तुष्टीपुर्वक जिउन दिनुहोस । ” “रञ्जना तिमीले यो कुरा पहिल्यै किन भनिनौ ? भनेको भए दुबैले यसरी तड्पिनु त पर्ने थिएन ! जे होस समय सबै कुरा सामु आयो । राम्रै भो । ठिक छ भोली बिहान दुबै जना मन्दिर जाने बहानामा घरबाट निस्किनु समान अहिल्यै प्याक गरेर मेरो गाडीको डिक्कीमा हाली राख्नु तिमीहरु कहा जाने कहा बस्ने सबै निश्चित गर्नु म त्यहि ल्याईदिन्छु यसो भो भने कसैलाई शङ्का हुन्न पछि म सबै मिलाएर घरमा भनुँला र सम्झाउँला । तिमीहरुको जिन्दगी तिमीहरुको खुशीले बाँच मेरो आशिर्वाद छ।”­ अमितले यति भनि सक्नासाथ लोग्नेमान्छेसंग जिन्दगीको खुशी नदेख्ने रञ्जना अनायास उसलाई गम्लङ्ग अङ्गालोमा बेरेर दुबै गालामा पटक पटक म्वाई खाई रहि । अघिपछि रञ्जनालाई छुन अङ्गालोमा बेर्न र चुम्बन गर्न ईच्छुक रहने अमितलाई रञ्जनाले छातीमा टाँसिएर चुम्बन बर्साउँदानि आज कुनै फिलिङ्गस नै नआएको देख्दा उ तिनछक परिरहेको थियो । कुनै डमी उसको जिउमा टाँसिएर झैं आभाष भईरहेथ्यो उसलाई । तर खै किन हो कुन्नी लोग्नेमान्छे नै मन नपराउने रञ्जना भने यतिखेर अमितलाई अङ्गालोमा बेरेर लगातार चुम्बन बर्साईरहेकी थिई ।
२६ असार २०७७, शुक्रबार २१:२३ मा प्रकाशित
सूचना विभागबाट जारी हुने प्रेस पास वितरण र नवीकरण स्थगित	२९ श्रावण २०७७, बिहीबार ०९:५७
थप ४८४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ८ जनाको मृत्यु	२८ श्रावण २०७७, बुधबार १७:१३